I-Seoulland yipaki yokuqala yaseKorea, eneendawo ezintle ezijikelezwe yiNtaba yeCheonggyesan. I-Seoulland inommandla obizwa ngokuba yi 'World Square' apho umntu anokujonga ukwakhiwa kwendalo kunye nezinto zabantu ezivela kwihlabathi liphela. Ungayijonga iKorea yemveli eSamcheonri Hill, entshona f…
Ingoma yeNgopa Naru
I-Songpa Naru Park, ekwabizwa ngokuba yiLokchonhosu Lake, yipaki yabemi eSeoul. Inamachibi amabini aneSongpa-daero Boulevard eqhuba phakathi, inendawo yokubaleka kunye neendlela ezihamba ngamachibi.
Operated by Lotte Group, Lotte World is the perfect spot for entertainment and sightseeing for Koreans and international tourists alike. It is a theme park filled with thrilling rides, an ice rink and different kinds of parades, as well as a folk museum, a lake, accommodations,…
IDaheeyeon iGadi (ngaphambili eyayibizwa ngokuba yiGyeongdeokwon) kwifama enkulu yetiyi kwisiqithi iJeju, eneemeko ezilungileyo zokukhulisa iti enkulu kwindawo yendalo. IJeju inomndilili ophakathi konyaka we-16 ℃ nomhlaba onobutyebi obunezondlo namanzi amaninzi ukuze izityalo zeti ikhule kakuhle ...…
UJeju, ngo-2008, wavula iholo yemiboniso ekhethekileyo eNanta, intsebenzo engenamazwi, eye yaba yenye yemicimbi yenkcubeko yokuyibona e-Korea ...…
Ukuhamba ngenqwelwana ngenqwelomoya kangangesithuba seyure ukusuka eTongyeong Port kuya kukusa kwindawo entle yeHaryeo Maritime National Park, kwiSomaemuldo Island. Ifumaneka esiphelweni sePeninsula yaseKorea, esi siqithi saziwa kakhulu ngamatye aso angaqhelekanga ematyeni aselunxwemeni, ulwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nesixeko esihle…
Amangcwaba eSikhumbuzo seUN
I-UN Memorial Cemetery yaseKorea ihlonipha amajoni e-UN asuka kumazwe ali-16 kunye nezinto ezincedisayo ze-UN ezivela kumazwe amahlanu awabulawa edabini ngexesha leMfazwe yaseKorea ukusukela ngo-1950 ukuya ku-1953. Le paki ye-serene isasazeka kwindawo enengca enomhlaba oziimitha ezili-135,000 ... ...
Intaba yaseGyeongju Namsan
INamsan Mountain eseGyeongju likhaya kwiitempile ezininzi kunye neendawo eziphakamileyo, kwaye yathathelwa ingqalelo njengengcwele ngabaninzi ngexesha leSilla Kingdom. Le ntaba inezithambeka eziphantse zibe ngama-40 eziphephezelayo ukusuka kwiGeumobong Peak (468 m ukuphakama), iGowibong Peak (494 m ukuphakama), kunye nezinye iinduli eziyingqongileyo. Kwakhona, le 4 km-…
I-eju Jungmun Resort ibonelela ipaki yedijithali yomxholo "DLALA K-POP" apho itekhnoloji yeendaba entsha kunye nomculo we-K-pop uhlangana khona. Ikhonsathi ye-Live Holo, ikhonsathi yehologramu, inika imincili ngakumbi kunekonsathi yangempela ...